Vaovao - Fahalalana momba ny singa sivana sivana vy
1. misy fizarana fenitra voafaritra ve ho an'ny singa sivana sinter? Afaka mividy singa sivana mahazatra ve aho?
A: azafady, ny singa sivana sintered dia tsy ampahany mahazatra. Matetika, novokarin'ny mpanamboatra azy io arakaraka ny andiana sanda antsipirihany toy ny habeny, ny endriny, ny akora ary ny sandan'ny sivana notondroin'ny mpanjifa.
2. Inona avy ireo fitaovana azo voafantina ho an'ny singa sivana sivana?
A: varahina, varahina, vy tsy misy fangarony, titanium ary firaka isan-karazany dia mahazatra. Matetika ny varahina dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny singa sivana sinter, ary ny metaly metaly no vidiny ambany. Ny antony ilain'ny mpanjifa misafidy karazana metaly hafa na alloys hafa dia mety noho ny tontolon'ny serivisy samihafa, toy ny hamafin'ny avo kokoa, ny fanoherana ny harafoana tsara kokoa, na ny mari-pana avo kokoa. Ny vy vy dia karazana fitaovana ampiasaina bebe kokoa ihany koa, noho ny fanoherana ny hafanana sy ny fanoherana ny harafesina dia tena tsara. Ho an'ny tontolo sarotra kokoa, mety ilaina ny firaka nikela. Mazava ho azy fa ny vidin'ireto alloys ireto dia somary avo lenta ary sarotra aroso, koa ho lafo kokoa ny vidiny
3. Inona no tokony hojerena amin'ny famolavolana ny sivana vy fanivanana
Valiny: rehefa mifantina ny singa sivana, dia mila mandinika ny salantsalon'ny sivana, ny lanja filtration, ny tahan'ny mikoriana amin'ny sivana, ny tontolo iainana ampiasaina, sns. Ny fampiasana samihafa dia mitaky sivana samihafa. Amin'ny famolavolana dia mila mandinika ireto hevitra manaraka ireto ianao:
1) Haben'ny puoro: amin'ny ambaratonga micron ihany koa. Ny haben'ny pore dia mamaritra ny haben'ny haino aman-jery tokony hosivaninao
2) Fihenan'ny tsindry: enti-milaza ny fizotran'ny rano na gazy amin'ny alàlan'ny fahaverezan'ny tsindry sivana. Tsy maintsy mamaritra ny tontolon'ny fampiasanao ianao ary manome izany amin'ny mpanamboatra sivana.
3) Halavan'ny maripana: ohatrinona ny hafanan'ny tontolo iainana miasa ao amin'ilay singa sivana amin'ny asany? Ny firaka vy nofidinao ho an'ny singa sivana dia tsy maintsy mahazaka ny hafanan'ny tontolon'ny asa.
4) tanjaka: ny singa sivana sintered no safidy tsara indrindra hahazoana tanjaka lehibe. Tombony iray hafa ihany koa ny fananan'izy ireo tanjaka mitovy amin'ny fikorianana mandroso na miverina.
4. Inona ny fampahalalana ilaiko omena ny mpanamboatra hametraka baiko?
1) Fampiharana: ao anatin'izany ny fampiasana tontolo iainana, sanda sivana, sns
2) haino aman-jery sivana
3) Inona no tokony hojerena, toy ny fanoherana asidra sy alkaly
4) Misy fepetra miasa manokana ve, toy ny mari-pana sy ny tsindry
5) Inona ny loto mety hitranga?
6) refy, endrika ary fandeferana
7) habetsahana takiana
8) Ahoana ny fametrahana
Sivana tsy misy vy, Sivana mandeha amin'ny fiara, Sivana entona indostrialy, Sivan-drano, Sivana amin'ny rivotra, Filtration amin'ny rivotra tsy miova,